Vanhu: Muzukuru weChristine Diana wakaona musangano rekomana wake wemillioneire wemakore 60. Heino nyaya yavo - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Vanhu: Muzukuru weChristine Diana wakaona musangano rekomana wake wemillioneire wemakore 60. Heano yenyaya yavo
Mwanasikana wehanzvadzi yaChristine Diana yakapera, Lady Kitty Spencer ane hukama hwakajeka kumhuri yeumambo. Kazhinji yenguva, zvakadaro, anotungamirira hupenyu hwake oga.
Munguva pfupi, kune runyerekupe kuti musikana uyu aizouya kuMichael Lewis, mamionaire fashion mogul. Maererano nemamwe mabhuku, vakaonekwa pamwechete paThe Mark Hotel muNew York.
Post by Eugenia Garavani (@eugeniagaravani) on May 12, 2019 pa 4: 14pm PDT
Iyi ihowo iyo hotera umo Duchess of Sussex akapemberera mabiko ake asati azvarwa muna February.
Kunyangwe zvave zvichive mwedzi yakawanda kubva kune runyerekupe pamusoro pehukama hwavo, Kitty naMichael vari kuita zvose zvavanogona kuti vasiye kure nemeso evanhu vose. Pamufananidzo wakawanikwa na DailyMail kubva kuUnited States, Michael, uyo ari mumusoro wefashoni yemafashoni yeW Whistles, anoonekwa achibva muhotera, achiteverwa naKitini.
Nokuda kwechipupuriro chekunze, kunyange dzimwe nguva ichionekwa pamwe chete, vaviri vacho vanoita zvakanakisisa kuti varege kuva zvakanyanya. Mikaeri akaita seanoramba ari kure neKitini, akamira pamusuo wehotera apo mukadzi wechidiki akanga achiri mukati. Pakarepo pavakangoona taxi yavo, zvakadaro, vaviri vacho vakabuda kundotarisa kumotokari vachichengeta musoro.
Maererano nemamwe magwaro, Michael ndiye murume akarambana nevana vatatu, uye mari yake inofungidzirwa ku 95 mamiriyoni [104 mamiriyoni].
- Anthony Roy Raybould (@RaybouldAnthony) Dai 12, 2019
Zvinosuruvarisa kuti vanhu vaviri vakadai seDaily Kitty Spencer naMichael Lewis vanofanira kuvanza nekuramba rudo rwavo kana vari munharaunda nekuda kwekutaura kwechisimba uye zvinyorwa pamusoro pezera ravo. Rudo harina mhedziso uye harifaniri kutongwa.
Kitty anoita seanoda varume vakawanda vakakura: mu 2016, dzimwe nzvimbo akataura kuti akanga ari muukama naNiccolò Barattieri di San Pietro, uyo anowanzoita makore maviri. Vangadai vakaparadzana mu 2017 nemakore 4 ehukama.
Kitty pia yakabatanidzwa kusvika kumugadziri we Tatler, Richard Dennen, kunyange zvazvo hukama hworudo husati hwasimbiswa.
Kusiyana nevamwe vanozivikanwa, Kitty Spencer haasi chaiwo mutauro wekuzviratidza pamwe chete neshamwari dzake mumagariro evanhu, zvinoratidza kuti anofarira kuchengetedza izvi zvehupenyu hwake pachake. Kuziva kuti iye anozivikanwa zvakadini zvinopfuura kunzwisisa. Izvozvo zvakati, chero bedzi achifara, vateveri vake vanoda chete zvakanakisisa.
Donald Trump inopisa inopisa, kwete kukwana nickel - Kumadokero kwe1er